Cunnooyinka naasnuujinta: xawaaree socodkaaga xiidmaha si dabiici ah | Cuntada Nutri
Cunnooyinka caloosha jilciya
Waxaa ku jira cuntooyin caloosha jilciya oo tiro badan qeybta miraha iyo khudradda ee dukaanka raashinka. Maaddaama ay noqon karaan aad waxtar ugu leh ka hortagga ama daaweynta calool istaagga, shaki la'aan waxaa mudan in la ogaado waxa ay yihiin.
Dawooyinka caloosha jilciya ee dabiiciga ah waxay ku siin doonaan kor u qaadista xiidmahaaga intay ku siinayaan fitamiinno iyo macdano muhiim ah shaqooyinka kale ee ka dhaca jirkaaga.
1 Maxay tahay sababta loo qaato dawooyinka caloosha jilciya?
2 Faleebooyin leh saameyn calool jilciyaha ah
3 Miyaad heleysaa fiber?
4 Cunnooyinka naas-nuujinta ee cuntadaada
5 Qaab nololeedkaaga ayaa sabab u ah calool fadhiga?
Maxay tahay sababta loo qaato dawooyinka caloosha jilciya?
Daawooyinka caloosha jilciya waxay bixiyaan xal degdeg ah oo wax ku ool ah oo ku saabsan calool fadhiga. Si kastaba ha noqotee, kuma haboona in la isticmaalo marar badan maxaa yeelay jidhku wuu la qabsan karaa inayan fulin dhaqdhaqaaqa mindhicirka laftiisa. Marka la soo koobo, daawooyinka caloosha jilciya waxay abuuri karaan ku tiirsanaan.
Beddelka ayaa ah cuntooyinka caloosha jilciya, oo sidoo kale ka caawiya socodka xiidmaha inuu dhaqso u socdo. Way fiicantahay in daadguraynta ay ku dhacdo si dabiici ah oo caafimaad leh iyadoo lala kaashanayo cuntada. Marka isku day dawada caloosha jilcisa marka hore.
Faleebooyin leh saameyn calool jilciyaha ah
Fiiri maqaalka: Faleebada laaxiga ah. Haddii aad jeceshahay dhirta iyo daaweynta dabiiciga ah, halkaas waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo leh sifooyin calool jilciye ah.
Miyaad heleysaa fiber?
Haddii dhibaato kaa haysato calool fadhiga, tani waa su'aasha ugu horreysa ee aad isweydiiso. Cunnooyinka Fibre-saboolka ah ayaa ka mid ah sababaha keena calool istaagga.
Qaddarka maalinlaha ah ee lagu taliyey ee ah faybarku waa 25 garaam, in kastoo tiradu ku kala duwanaan karto iyadoo ku saleysan jinsiga ama da'da. Xeelad aad u fiican oo lagu helo wax intaa ka badan ayaa ah in lagu sharfo miraha oo dhan iyo alaabadaas oo muujinaya xaddi aad u badan oo faybar ah oo ku qoran summaddooda. Si kastaba ha noqotee, waxaad ka heli kartaa fiber inta badan cuntooyinka ka dhashay dhulka. Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah khudradda ugu badan ee liinta leh. Xusuusnow inaad ka hesho faybarkaaga cuntooyin badan intii suurtogal ah halkii aad ku koobi lahayd mid keliya:
Baradha (maqaar leh)
Tufaaxa (maqaarka leh)
Brussels ayaa soo baxday
Waa in la ogaadaa in waxtarka faybarku aanu ku koobnayn dheefshiidka. Waxaa loo tixgeliyaa taas Maadadani waxay kaloo door muhiim ah ka ciyaartaa nidaaminta sonkorta dhiigga iyo heerarka kolestaroolka., iyo sidoo kale marka la yareeyo halista ah in uu ku dhaco cudurrada wadnaha iyo xididdada.
Cunnooyinka naas-nuujinta ee cuntadaada
Dadka qaarkiis waxay qabaan marar badan kuwa kale, laakiin guud ahaan, qofna kama badbaado calool istaagga. In sidan, waxaad u maleyneysaa inaad horeyba iskudayday qaar kamid ah cuntooyinkan caloosha jilciya:
Abuurka xajmiga leh
Ka kooban inta badan biyaha (qaadashada H2O kugu filan waxay sii xumeyn kartaa calool fadhiga), midhahan waxaa badanaa lagula taliyaa xaaladaha calool istaagga sababo la xiriira saamayn jilicsan oo jilicsan. Tan waxaa ugu wacan iyada sorbitol iyo maadada fiber, walxaha hagaajiya isu-socodka mindhicirka. Ha ahaato mid cusub, mid fuuqbaxay ama qaab cufan leh, tubta ma aha mid ka mid ah daaweynta ugu caansan ee calool istaagga dabiiciga ah. Waa mid aad waxtar u leh.
In kasta oo ay u muuqato inta badan sida calool jilciyaha dabiiciga ah, waxaa xusid mudan in tubta sidoo kale loo aaneeyo guryaha kale ee aadka u xiisaha badan. Cilmi baaris ayaa u soo bandhigtay iyada oo ah antioxidant, sunta jeermiga iyo miraha dherga (waxay u fiican tahay miisaanka oo yaraada haddii si dhexdhexaad ah loo cuno).
Berdaha macaan waa cunno kale oo leh saameyn calool jilicsan. Sirtu waxay ku jirtaa isku darka fiber iyo magnesium waxay bixisaa. Ka sokow ka hortagga iyo la dagaallanka calool istaagga, berde sidoo kale waxay siisaa qiyaas wanaagsan oo tamar ah. Sidan oo kale, ku darista cuntadaada waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan inta lagu jiro xilliyada baahida weyn ee jireed ama aqooneed. Waxaa sidoo kale loo arkaa mid xiiso u leh dadka qaba kolestaroolka sare ama dhiig karka.
Habka ugu fiican ee lagu ilaalin karo marinka wanaagsan ee xiidmaha ayaa ah hubi inaad had iyo jeer cuntooyinka caloosha jilciya ku dhexjirtid halkii aad u adeegsan lahayd iyaga kaliya marka ay dhibaatooyin jiraan.
Qaab nololeedkaaga ayaa sabab u ah calool fadhiga?
Cunnooyinka caloosha jilciya ayaa waxtar badan leh marka lagu daro qaab nololeed caafimaad qaba. Isbedelada soo socda ayaa kaa caawin kara inaad sifiican uga guurto, xitaa adiga oo aan u baahnayn inaad qaadato nooc kasta oo calool jilciye ah.
Haddii aad ku jirto culeys badan, cuntada ayaa si tartiib tartiib ah ugu socon doonta mindhicirkaaga. Kiiskan, farsamooyinka nasashada waxay kaa caawin doonaan inaad xalliso dhibaatada. Dhanka kale, Jimicsi la’aan ayaa sidoo kale saameyn taban ku leh isu-socodka mindhicirka. Markaa iska ilaali inaad fadhiisato oo jimicsi joogto ah haddii aadan horey u sameyn. Ka hortagga calool istaagga ayaa ah mid ka mid sababaha badan ee loo bilaabayo tababarka.
Waa in la ogaadaa in cudurada qaarkood sidoo kale waxay sababi karaan calool istaag, taas oo ah sababta markay tahay mid joogto ah (oo soconaysa dhowr toddobaad) ama ay la socoto astaamo kale (oo ay ku jiraan miisaanka oo yaraada), waa inaad u tagtaa dhakhtarka si loo baaro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Nafaqeyn » Cunnooyinka caloosha jilciya
Cunto si loo qeexo